Real Madrid oo go’aamisay mustaqbalka Keylor Navas – Gool FM
(Real Madrid) 09 Dis 2018. Wargeyska Isbaanishka ah ee AS ayaa xaqiijiyay in Keylor Navas uusan dooneynin sii joogi taanka kooxda Real Madrid, goolhaayaha reer Costa Rica ayaan ku faraxsaneyn doorkiisa haatan ee Los Blancos.
Keylor Navas ayaa wuxuu doonayaa inuu raadsado meel ka baxsan kooxda Real Madrid, isagoo doonaya inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in wakiilkiisa uu dhowr isbuuc ka shaqeenayo sida uu Keylor Navas dalab rasmi ah kaga heli lahaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Los Blancos ayaa fahansan in Keylor Navas uu dareemayo niyad jab xoogan sidaas darteed waxay diyaar u tahay inay ka fasaxdo xili ciyaareedka soo aadan garoonka Santiago Bernabéu.
Dhinaca kale Navas ayaa ku fikiraya suurtagalnimada uu Real Madrid kaga bixi karo suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan, hadii uu helo dalab uu ku qanci karo.
Laakiin maamulka kooxda Real Madrid ayaan xiligan diyaar u ahayn in go’aankaas ay qaadato, sababtoo ah waxaysan ku kalsooneen doorka goolhaayeheeda saddexaad kooxda ee Kiko Casilla.
Sidaas darteed Los Blancos ayaanan dooneynin in ay fasaxdo Navas ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan, si uu badal ugu noqdo hadii uu Thibaut Courtois dhaawac ama ganaax uu la kulmo inta lagu gudi jiro bilaha mashquulka badan ee xili ciyaareedkan.
Juventus oo xiddig lama taabtaan ah ka doonaysa PSG